Nahoana no zava-dehibe ny mitady fotsy SEO iray?
Ity lahatsoratra ity dia nanolo-tena tamin'ireo masoivoho rehetra izay te-hanolotra ny soso-kevitr'izy ireo amin'ny sariitatra fotsy SEO. Ankehitriny, ireo manam-pahaizana ao amin'ny Semalt dia hanazava ny tombontsoa voalohany amin'ny fampitaovana ivelany ary hamaritana raha mety ny modely ara-barotra ho anao.
Manontany tena raha mety amin'ny orinasanao fotsy ny mpivarotra SEO mpivarotra amin'ny orinasa? Mba hamaliana ity fanontaniana manaraka ity, dia mila manazava ny tsipiriany sasany aloha isika - portland computer support. Noho izany, akaiky kokoa ny teboka.
Ny sasany amin'ireo fanontaniana mahazatra matetika dia matetika ny seraseran'ny fikambanana madinika sy afovoan-tany rehefa manomboka ny diany mankany ivelany SEO dia ireto manaraka ireto:
1. Ahoana no fiasan'ny Fandaharam-panofanana Outsourcing?
Ny zavatra voalohany tokony handinihanao ny fisafidianana ny orinasa mpaninjara dia ny mandrindra sy manipika ampy ny ekipa mba hahazoana ny asa vita. Tadidio fa raha fantatry ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa hoe rahoviana no ho vita ny asa ary inona no ananan'ireo vokatra, dia mbola betsaka ny orinasa afaka hahazo tombontsoa amin'ny fomba toy izany.
Tadidio fa tokony hisy rafitra mifandraika amin'ny serasera, manara-maso ny hetsika rehetra momba ny fahafahana misafidy. Ataovy azo antoka koa fa mazava ny vokatra azo ary manana fandaniana tsy tapaka azonao takarina.
2. Iza no hifehezany ny vidim-panavotana aorian'ny fametrahana ny asa ho an'ny mpivarotra SEO?
Rehefa mandao ny asan'ny orinasa ianao, dia tsy midika izany fa tsy mahavita mifehy ny zava-mitranga ianao. Satria ny fitaovana ampiasain'ny orinasa iray hafa dia tsy midika fa tokony hisy fiantraikany ratsy amin'ny zava-mitranga. Satria ny orinasa dia mijery ny SEO, tokony hahita ekipa iray izay mahaliana 100% ary liana amin'ny fanehoan-keviny.
Ireo ekipa miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka ireto dia tsy hahatonga anao tsy hifehy. Ho solon'izy ireo, izy ireo dia hitazona anao amin'ny fanavaozana ny fandrosoana. Ny fifandraisana tsara amin'ny orinasa fotsy SEO dia midika fa afaka maimaim-poana foana ny fanapahan-kevitra momba ny famindrana mpanjifa.
3. Tokony hanantena ve aho fa hisy ny tatitra avy amin'ny Masoivohon'ny SEO?
Eny, tokony. Ny tatitra dia ampahany manan-danja amin'ny fampielezan-tsokosoka ivelany. Ireo tatitra avo lenta sy antontan'isa avo lenta dia fitaovana matanjaka izay manampy anao amin'ny fanaraha-maso bebe kokoa ny workflow. Manampy ny tranokalan'ny tranokalo izy ireo hahatakatra raha toa ka tonga ny fotoana rehetra ary vita tsara.
Satria ny sampana tsirairay dia manana fomba hafa hitaterana azy, dia zava-dehibe ny hiresahanao amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary hijery hoe maninona ny mombamomba ny fotsy SEO dia mameno ny zavatra ilainao.
Ianao irery no afaka manapa-kevitra ny amin'izay mety aminao sy ny raharahanao. Na izany aza, misy tombontsoa marobe amin'ny fampiasana ny masoivoho izay efa nahatratrarana ny roa: ny haavom-pitantanana sy ny fahaiza-manaon'ny teknolojia. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa toy izany dia ho mora kokoa aminao ny mifantoka amin'ny fitomboan'ny orinasa.
Araka ny efa nokarohin'ny fikambanana maro, amin'ny fampiasana fàtana fotsy SEO iray dia làlan-kizorana ho an'ny fitomboana raha vita tsara. Na izany aza, tokony tadidinao fa ny fahazotoana amin'ny dingana mifantina dia tsy maintsy atao amin'io dia io.
Manantena isika fa ankehitriny dia takatrao ny maha-zava-dehibe ny fifaneraserana amin'ny mpivarotra fotsy SEO.